I-Roidmi F8 Lite, amandla nokuguquguquka ngentengo enhle | Izindaba zamagajethi
I-Roidmi F8 Lite, amandla nokuguquguquka ngentengo enhle
ULuis Padilla | | Ikhaya, Izibuyekezo
URoidmi wethule umshini wokuhlanza ongenantambo omusha weF8 Lite, imodeli ecishe ifane “nomfowabo omkhulu”, uRoidmi F8 Storm ophumelelayo, kodwa ngentengo ebiza kakhulu. Ngomklamo oqaphe kakhulu, ngenxa yokuguquguquka okukhulu ngenxa yamakhanda ahlukahlukene okubandakanya, ukukhululeka kokusetshenziswa nokuzimela okukhulu namandla wokuhlanza, lokhu IRoidmi F8 Lite iba ngesinye sezikhombo esigabeni sayo uma sibheka inani lemali. Sizamile futhi sikutshela okuvelayo.
1 Idizayini enhle futhi esebenzayo
2 Imininingwane ephelele yekithi ne-premium
3 Ukuhlanza nokugcinwa okulula
Idizayini enhle futhi esebenzayo
URoidmi ukhethe ukugcina ukwakheka okufanayo kule F8 Lite njengaseF8 Storm, okubonakala kuyimpumelelo kimi. Kuyinto yokuhlanza engenantambo engenantambo, ngaphandle kwaleyo miklamo "yangaphandle" kweminye imikhiqizo, enolayini abasangulukile kakhulu kanye nedizayini yesimanjemanje neyincane lapho sinezici esizidingayo, ngaphandle kokunye ukujabula. Bangeze umbala oluhlaza okwesibhakabhaka "Sky Blue" okunikeza ukubukeka okungajwayelekile, kepha uma kungenjalo, kunzima ukuhlukanisa phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili.
Kepha kulolu hlobo lwesitsha, ukwakheka akufanele kuphazamise ukusebenza kwedivayisi, futhi yilokho kanye abakuzuzile kulesi sixhobo sokuhlanza esiphathwa ngesandla. Idizayini yayo yesimanjemanje nayo ilungele ukubamba i-vacuum cleaner kunoma isiphi isikhundla ngenxa yesibambo esingu-270º esikuvumela ukuthi uyisebenzise njenge-vacuum cleaner ejwayelekile, uyifake emakhoneni angenakufinyeleleka kakhulu futhi konke lokhu ngaphandle kokugcina ungakhululekile ehlombe noma esihlakaleni. Kuyimpumelelo futhi ukukhipha nge "trigger" yakudala yamanye amamodeliLapha inkinobho iyayivula, futhi inkinobho efanayo iyayicisha, nenye inkinobho yemodi ye- "turbo". Ngenkathi ikhala, hambisa isandla sakho esizungezeni ngokukhululeka ngokuphelele ukuhambisa umshini wokuhlanza, akudingeki ucindezele futhi ubambe noma yini.
Imininingwane ephelele yekithi ne-premium
Ukuba imodeli ye- "Lite" kusho ukwenza ngaphandle kwezici ezithile okubandakanya imodeli ye- "Top" (F8 Storm), kodwa ungalenzi iphutha ngoba okubalulekile kuyigcina ingashintshi. I-Kit efakwe ebhokisini ayiphelele kangako, lokho kuyiqiniso, kepha kufaka lokho okudingayo ngempela i-99% yesikhathi: inhloko enkulu ene-extender yayo ukuyisebenzisa njenge-vacuum cleaner, ikhanda elincane ukuyisebenzisa komatilasi, izihlalo zemoto, izihlalo zezingalo nezinye izikhala ezincane, isihlungi esingeziwe kuleso esivele sifakiwe kuyunithi enkulu, isisekelo ishaja.
Ikhanda eliyinhloko lifaka iroli ejikelezayo ejikelezayo, eshintshashintshanayo, futhi lokho kwenza ukuhlanza ngalesi vacuum cleaner kucace kakhulu kunokuhlanza okuvamile okususa ukungcola kuphela. Siphuthelwa ibhulashi le-microfiber lesibili uma liqhathaniswa ne-F8 Storm, nokukhanya kwe-LED ekhanda ukukhanyisa izindawo ezikhanya kakhulu, njengaphansi kombhede. Ukuhamba kwekhanda kuvumela ukuthi i-vacuum ijikeleze ngokujija okulula kwesihlaka, okwenza kube lula ukufinyelela emakhoneni, kanye nokwenza kube lula ukuhamba phakathi kwemilenze yezihlalo. Ngeyunithi enkulu isisindo singu-2,4Kg, esiba yi-1,3Kg uma sisetshenziswa njenge-vacuum cleaner ephathwa ngesandla.
I-digital cyclonic motor yayo efinyelela ku-80.000 revolutions ngomzuzu iyinikeza amandla amakhulu okuncela, futhi ibhethri layo elakhelwe ngaphakathi likuvumela ukuthi usebenzise umshini wokuhlanza kuze kube yimizuzu engama-40 usebenzisa imodi ejwayelekile. Uma usebenzisa imodi ye- "Turbo", ukuzimela kwehla kuya kumzuzu eyi-10. Imodi evamile yomshini ingaphezu kokwanele ezikhathini eziningi, ishiya imodi ye- "Turbo" ekusetshenzisweni okuthile, ngakho-ke ukuzimela kwesihlanza se-vacuum kungaphezu kokwanele ukugcoba iphansi elijwayelekile. Ukugcwaliswa kabusha kwe-vacuum cleaner kuhamba ngokushesha kusuka ku-zero kuye ku-100 emahoreni amabili nohhafu nje kuphela. Inkomba ye-LED isivumela ukuthi sazi ibhethri elisele ngasosonke isikhathi.
Ngenxa yokuxhaswa ngamagnetic singashiya umshini wokuhlanza ukhokhisiwe ukuze uhlale ulungile noma nini lapho siwudinga, futhi ukwakheka kwawo kwenza ukushiya kungabi yinkinga, ukuze kuthi lapho uwudinga, ukufinyelela kwawo kube khona ngokushesha. Ekugcineni, lawa madivayisi kungenzeka abheke noma uyeke ukuwasebenzisa ngenxa yobuvila bokuyifuna, ukuyifaka, njll. Kukho konke lokhu kumele sengeze i- uhlelo lokuhlunga oluthuthukile olune-HEPA, nesihlungi se-HEPA nesiponji esikwazi ukumunca izinhlayiya ze-PM-O3, esingasusa ngayo i-99% yama-allergen ebusweni obumunyiwe, sibuyisele umoya ohlanzekile emvelweni. Uma umuntu eguliswa yizibungu ekhaya, bazokwazi ukuthi bangazihlola kanjani lokhu kuchazwa ngokwanele.
Ukuhlanza nokugcinwa okulula
Uma sesiwenzile umsebenzi wokuhlanza singaqhubeka sikhiphe ithangi. Alukho uhlobo lwesikhwama lapha, isihlungi nje okumele sizihlanze ukuze impilo yaso ibe yinde ngangokunokwenzeka (enye ifakiwe ebhokisini). Ithangi lokuhlanza linamandla okusetshenziswa ngokugcwele futhi ukukhishwa kwalo kwenziwa ngokuvula ikhava engezansi. Ukuba yithangi elisobala siyabona ngqo uma kunesidingo sokulithulula noma cha futhi kuthatha isikhathi esingaphansi komzuzu ukususa idamu, ulithulule bese ulibuyisela endaweni yalo.
Ngaphezu kwalokho, ukuqaqa zonke izingxenye zokuhlanza kahle idivayisi kufanele kwenziwe ngezikhathi ezithile, ngokuya ngokusetshenziswa kwayo. Kuyindlela elula kakhulu ethatha cishe imizuzu emihlanu kuphela futhi ishiya umshini wokuhlanza ungenacala lokuqhubeka nokuwusebenzisa nsuku zonke. Awekho amathuluzi adingekayo, futhi ukwakheka kwezingxenye ezahlukahlukene kuyakuvumela Kokubili ukukhishwa kwayo nokubekwa kwayo okulungile kulula kakhulu nakwisimo sendlu esibi kakhulu.
I-Roidmi F8 Lite vacuum cleaner ikwazile ukwenza ngaphandle kwezakhi ezithile ukwehlisa izindleko zokuhlanza i-vacuum, kepha ngaphandle kokunciphisa kokubaluleke ngempela. Yize okuqukethwe ebhokisini kungaphelele njengakwimodeli ye-F8 Storm, umehluko wamanani usho ukuthi kubasebenzisi abaningi le modeli ye-Lite ingaphezu kokuhlangabezana nokulindelwe kwabo. Amandla amakhulu okudonsa, ukuphatha okulula kakhulu nezici ezinhle zikwenza kube okunye kokuhlanza okungenantambo okunenani elingcono lemali emakethe. Ibuye ibe newaranti yeminyaka emihlanu yezimoto neminyaka emi-5 yezingxenye. Intengo yayo ku-Amazon ingu- € 199 (isixhumanisi) okuyiphuzu elisemthethweni lokuthengiswa kweZiclotech, umsabalalisi wayo osemthethweni eSpain futhi lapho-ke sizoba nesiqinisekiso esisemthethweni.
I-Roidmi F8 Lite
Ukuklama nokusebenziseka kalula
Ayikho inhlamvu yokusebenza
Iwaranti yonyaka emi-5 emotweni
Akukho ukukhanyisa ekhanda
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-Roidmi F8 Lite, amandla nokuguquguquka ngentengo enhle
Ungakaze Ubone Amanani ku-Amazon kuze kube nguNovemba 12
Ongabuka ku-Netflix, HBO naku-Movistar + kulo Novemba